Vakashela uFlorence ngo-Okthoba | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Florencia, Izaziso
U-Okthoba inyanga enhle ukuvakashela e-Italy Yebo, kusashisa futhi empeleni kungaba izinsuku zasehlobo. Kuyiqiniso ukuthi nayo ingana kodwa ngenhlanhla yizimvula noma iziphepho ezimfushane futhi abakwenzayo ukupholisha ubuhle bendawo.
Enye yezindawo ezinhle zase-Italy Florencia futhi uma unohambo olubonakalayo kule nyanga, idolobha lizokwamukela ngezandla ezimhlophe, izindaba, imibukiso, irestshurentiIsigaba sokuqala, futhi uma uhamba ngemoto futhi usuvele uyazi ukuthi awukwazi ukungena esikhungweni seFlorentine, kukhona okusha ukupaka komphakathi vala!
1 Imicimbi eFlorence
2 Ukuhamba uFlorence ngemoto
U-Okthoba yinyanga enemisebenzi eminingi. Impelasonto eqala maduzane, okungukuthi impelasonto yesithathu ka-Okthoba, yenzeka I-Fortezza da Basso Fair Anti Fair. Kuyithuba elihle impela ukuhambahamba, upheqa futhi uthenge uma sizimisele ukutshala imali.
Uma ulithanda leli gagasi lezimakethe ngeSonto kukhona i- Imakethe Yezintambo eLargo Pietro Annigoni (imakethe ihlelwe ngeSonto lesine lika-Okthoba, ukuthola eminye imininingwane). Kunamathilomu aseduze ukuze ukwazi ukuhlanganisa i-gastronomy nokuthenga hhayi izingubo kuphela kodwa izincwadi, amarekhodi, ifenisha, ubuciko nokuningi.
Ekhuluma ngokudla, iTuscany yase-Italiya yizwe lama-chestnut futhi ngo-Okthoba 8, 15, 22 no-29 i Umkhosi waminyaka yonke weMarradi Chestnut, idolobhana elisentabeni kuma-Apennines.
Umkhosi wenzeka emaphandleni aseMugello, indawo eyaziwa ngekhwalithi yama-chestnut ayo anegama lendabuko. Ukufika lapho, into ekahle ngukugxuma esitimeleni esisuka ePistoia, sime ePrato, eFlorence (lapho ungagibela khona) nasePontassieve ukuya eBorgo San Lorenzo. Lapha ushintsha usuka esitimeleni esidala uye esitimeleni esidala futhi wazi ukuvuna kuqala kokhokho.
Ngaphandle kwama-chestnut kukhona ama-truffle emehlweni nango-Okthoba 21, 28 no-29 i Tartufesta, eMontaione. Kukhona amatafula amaningi anama-truffle azo zonke izinhlobo, enkabeni yomlando yaseMontaione, ahlanganiswe namafutha omnqumo, ama-chestnut, ushizi noju. Futhi ezungeze ama-truffles ngempelasonto yokugcina ka-Okthoba yi- UTartufo Bianco e Nero, eMugello. Lo mkhosi usekelwe ku-truffle emnyama futhi izingane zingaqoqa ama-truffle asatshalaliswe esikhungweni esingokomlando sedolobha.
Omunye umkhosi oseduze neFlorence yi IPorcini Mushroom Festival eCertaldo. Kuza kube lula kakhulu futhi ungazama inyama yenkomo yaseTuscan ngamakhowe we-porcini. Umkhosi uba njalo ngempelasonto ngo-Okthoba futhi uqhubeka kuze kube nguNovemba 5. Ngo-Okthoba 20, ngakolunye uhlangothi, ku- UPiazza Santa Croce ungazama ubumnandi bendawo: i buffala, mozzarella, uma kwenzeka Sagra della Bufala.
U-Okthoba futhi uyinyanga kaMozart eFlorence futhi ukucaphuna kukumangalisayo IPitti Palace. Umjikelezo uhlala izinyanga ezintathu isiyonke, ngo-Okthoba, Novemba nangoDisemba, futhi ungagcina amathikithi kusengaphambili ukuze uzinikeze lokho kunambitheka komculo owufunayo. Umculo kaMozart uyamangalisa futhi ikakhulukazi kule ndawo yezindlu ngakolunye uhlangothi lwe-Arno.
Kukhona nesethulo esihle kuMedici kuyo yonke inyanga ka-Okthoba: The Medici Dynasty, umbukiso wesiNgisi ngomndeni wonke: ingcebo, amandla, ukubulawa kwabantu, ubuqili. Kuvela ngaphakathi kweConvent of Sant 'Onofrio delle Monache di Foligno, esontweni elincane lezimbali ngaphakathi, futhi lihlala ihora elihlanganayo imidlalo yaseshashalazini, amahlaya nomculo obukhoma. Kuhle njengokufinyelela emlandweni weMedici ngaphandle kokufunda izincwadi zomlando.
Kulo nyaka, ngaphezu kwalokho, umculi udale iqoqo lamatshe ayigugu aphefumulelwe umbukiso, enziwe ngezandla estudiyo sakhe saseFlorentine futhi angathengwa lapha kuphela. Inkumbulo enhle, uma ungibuza. Umbukiso wansuku zonke kusuka ngoJuni kuya kuNovemba (nezinye izinsuku unyaka wonke), ngo-7 ntambama eVía Faenza, 48. Ithikithi libiza ama-euro angama-30s.
Omunye umcimbi onconyiwe uwukuthi fly ngebhaluni lomoya elishisayo phezu kukaFlorence emkhosini delle Mongolfiere Okthoba 28 no-29 nenye impelasonto ngoNovemba.
Ukuhamba uFlorence ngemoto
Sesivele sazi ukuthi akunakwenzeka ukusabalalisa ngemoto maphakathi neFlorence, ngamatekisi namabhasi endawo kuphela angakwenza. Ngakho-ke, uma ungafiki ngesitimela ngoba uqashe imoto ukuze ihambe ngokukhululeka, ayikho enye indlela ngaphandle kwalokho park ngaphandle kwedolobha elinomlando.
Izindaba ezimnandi ukuthi kusukela maphakathi noJuni kunenye indlela yokupaka. Ngaphandle nje kwedolobha laseScandicci kukhona indawo enkulu yokupaka izimoto namabhasi que ibizwa ngeVilla Costanza, uphume ku-A1, umgwaqo omkhulu. Lapha ungapaka futhi uthathe ithilamu ukungena eFlorence ngemuva kwesigamu nje sehora lokuhamba. Le tramu isuka njalo emizuzwini emithathu kuya kwemine usuku lonke.
Indawo yokupaka kuyakhokhelwa futhi uyithola khona kanye phakathi kokuphuma komgwaqo i-Firenze-Scandicci neFirenze-Impruneta komgwaqo omkhulu u-A1. Kukhona uphawu olubonakala ngokucacile olumemezelayo. Unikezwa ithikithi elizenzakalelayo futhi uma ubuya, lapho uthatha imoto, ukhokhela ukuhlala. Isayithi linamandla wezimoto ezingama-505 futhi livulwa nsuku zonke evikini amahora angama-24 ngosuku. Ungakwazi ukupaka izithuthuthu namakharavani kodwa awukho ugesi noma insiza yamanzi. Ukuhlala okuncane kuyisigamu sehora, izindleko zehora lokuqala I-1 euro, amabili amahora amane, amane amahora ayisishiyagalombili nesikhombisa usuku lonke.
Kunezindlu zangasese, ihhovisi lezivakashi nendawo yokudlela edayisa imikhiqizo yendawo. Zingamanani amahle kepha uma ungafuni ukukhokha noma yini kufanele ubheke i- ukupaka mahhala. Ngenhlanhla kukhona ezine emaphethelweni eFlorence: Pizzale Michelangelo, Ponte a Greve, Firenze Certosa noGalluzzo. Akekho ovalayo. Uma uzoyishiya usuku lonke, eyokuqala ilula futhi uma uzoyishiya ebusuku, eyesibili ilula ngoba inokuxhumana okungcono nethilamu kanye nesikhungo seFlorentine.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » Vakashela uFlorence ngo-Okthoba
Izindawo eLondon okungenzeka ubungazazi